I-T Iqonde ngqo ku-Garment China Manufacturer
Incazelo:Umshini wokunyathelisa we-T we-T,I-T Iqonde ngqo ku-Garment,I-3d T Shirt Yokushicilela Umshini
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > I-T Iqonde ngqo ku-Garment
Umshini wokushicilela we-T:
Ifektri yethu ikhiqiza kakhulu iphrinta ephathekayo. Le T Shirt ngqo kuya Garment kushisa kakhulu emakethe. Singakunika inani elihle kakhulu nensizakalo enhle.
Amaphrinta ethu anama technologies amaningi amasha ahlukile kwabanye. Samukela uhlelo lwedijithali, ukuskena okucacile kwe-infrared, inzwa yezinhlangothi eziningi kanye nezingxenye ezicacile eziphezulu, ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwephrinta kunemibono ezinzile futhi ecacile! I-3d T Shirt Yokushicilela Umshini yenza isithombe sakho sibonakale sihle.
Umshini wokunyathelisa we-T we-T I-T Iqonde ngqo ku-Garment I-3d T Shirt Yokushicilela Umshini Umshini wokunyathelisa we-A3 Umshini wokunyathelisa we-T-Shirt we-T Shirt Umshini wokunyathelisa we-Foam Umshini Wokunyathelisa we-Latte Umshini wokunyathelisa we-Textile Ink